जेफ बेजोस (दायाँ) पिताका साथ ।
वासि‌ङ्गटन, ५ जेठ । संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति र अमेजनका फाउण्डर जेफ बेजोसले आफ्नो पिता माइक बेजोसको संघर्षको कथा सार्वजनिक गरेका छन् । जेफका अनुसार उनका पिता १६ वर्षको उमेरमा क्युबा छाडेर एक्लै अमेरिकाको फ्लोरिडा पुगेका थिए । १९६२ मा जब उनी अमेरिका पुगेका थिए तब उनी केवल स्पेनिश भाषा बोल्न जान्दथे । उनलाई अंग्रेजी पनि सामान्य त आउँथ्यो । तर भाषा लगायतका अन्य अवरोधले उनलाई रोकेन । उनको हिम्मत, दृढ निश्चय र आशावादिता प्रेरणा दायक छ ।
जेफ भन्छन्, ‘ती दिनहरु कल्पना पनि गर्न सकिन्न । पिता तीनवटा शर्ट र तीनवटा पाइन्ट लिएर अमेरिका आएका थिए । उनलाई परिवारले फिडेल क्यास्त्रोको शासनबाट असुरक्षित देखेपछि अमेरिका पठाएका हुन ।’
जेफले बाबुको यात्राका भिडियो शेयर गर्दै मानिसले एकअर्कालाई कसरी मद्दत गर्न सक्छन् भन्नेबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । स्टेच्यू अफ लिबर्टीको नयाँ म्यूजियम उद्घाटनको अवसरमा बेजोसले उक्त भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन् । १५ मेमा संग्रहालयको उद्घाटन समारोहमा जेफ बेजोसका पितालाई स्वतन्त्रता सम्मान पनि मिलेको थियो ।
यद्यपि, माइक जेफका जैविक पिता भने होइनन्, तर अमेजनको संस्थापकको सफलतामा उनको महत्वपूर्ण योगदान छ । जेफकी आमा जैकलिन गाइजले १९६८ मा माइक बेजोससँग विवाह गरेकी थिइन् । त्यतिबेला जेफ केवल ४ वर्षका थिए । जैकलिनले पहिलो पति टेड जोर्गनसनलाई १९६५ मै सम्बन्धविच्छेद दिएकी थिइन् ।
पटक-पटक अस्वीकृत हुनुभयो ? यी सात कुरा ध्यान दिनुस्
के बन्न रुचाउनुहुन्छ- पर्यटक कि यात्री ?
कसरी तनावमुक्त रहने ?
स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुन्छ एसिडिटी, यसरी बच्न सकिन्छ !
सामाजिक सञ्जालले कसरी बिगारिरहेछ तपाईंको निन्द्रा ?
मुख धुने पनि तरिका हुन्छ !
तपाईंलाई थाहा नहुनसक्छ घोप्टो परेर सुत्दाका यी बेफाइदाहरु
शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा देखिन्छन् यस्ता असरहरु
काठमाडौँ, २३ मंसिर । गएको हप्ता रिलिज भएका दुई फिल्म पति पत्नी और वो र पानीपथले बक्स अफिसमा कमाई गरिराखेका छन् । मिडिया रिपोर्टका...